Mgbatị, Akụkụ, Modul na Plugins maka Joomla! - Joomla Ngwọta
Joomla-Solutions.com Ihe mgbakwunye maka CMS Joomla!
My nka Joomla
Joomla ma ọ bụ WordPress?
Mepụta weebụsaịtị na Joomla
Ihe mejuputara Joomla
Kedu ụdị mgbakwunye m nwere ike ịwụnye na Joomla?
Kedu ndọtị ịhọrọ ịmepụta saịtị Joomla?
Etu esi ewunye ndọtị ma ọ bụ modulu na Joomla?
Gbanwee Joomla Template
Esi mepụta webụsaịtị na Joomla?
Ndị ọrụ plugins
Ihe mgbakwunye ọdịnaya
Isiokwu - Faịlị
Isiokwu - Ndenye aha
Isiokwu - Foto
Isiokwu - Mkpu email
Isiokwu - Ihe omume
Isiokwu - Ihe omume akwụ ụgwọ
Akụkụ, modulu & plugins maka Joomla CMS!
JoomlAddComments Ebe obula
Ihe ngwungwu a maka Joomla tinyere akụrụngwa na modul ga-enye gị ohere ịgbakwunye mpaghara ikwu na ibe ọ bụla nke weebụsaịtị gị.
Ihe mgbakwunye a na-enye ndị ọrụ ohere itinye vidiyo Dailymotion na profaịlụ ha.
Igwe a gosipụtara windo popul modal nke na-arịọ onye ọrụ ka o gosipụta afọ ya tupu ịnweta peeji ahụ.
Ọ na - enye gị ohere ịlele afọ nke onye ọrụ tupu ị banye peeji nke echebere maka ndị okenye, dịka ọmụmaatụ.
Ihe mgbakwunye a na-enye ndị ọrụ ohere itinye vidiyo Vimeo na profaịlụ ha.
Ihe mgbakwunye a na-enye ndị ọrụ ohere itinye vidiyo TikTok na profaịlụ ha.
Ihe omume JoomlAdd
Ihe ngwugwu 2 a na-enye gị ohere ijikwa ihe omume sitere na isiokwu Joomla.
Ihe mgbakwunye a maka Joomla na-enye ndị ọrụ ohere itinye vidiyo Youtube na profaịlụ ha.
Ihe mgbakwunye a na - enye gị ohere ijikọ ndepụta nke onyonyo na ederede Joomla ma gosipụta ha n’okpuru.
Ngwa mgbakwunye a na-enye ohere itinye aka nke bọtịnụ "Inye" na profaịlụ njirimara.
Ihe mgbakwunye Joomla a na-enye gị ohere izipu otu edemede ma ọ bụ mmeghe ya site na email na otu ndị ọrụ ma ọ bụ adreesị email.
Ihe mgbakwunye a na - enye gị ohere itinye foto profaịlụ na akaụntụ onye ọrụ Joomla. Ntinye na nhazi ngwa ngwa na nfe.
Ndenye aha JoomlAddFiles
Ngwaọrụ Joomla a na - enye gị ohere iji isiokwu dịka mpempe akwụkwọ. Enweghị mkpa ịwụnye ngwọta e-commerce dị egwu ma na-eri oge iji hazie. Ihe mgbakwunye a na-agbakwunye ọrụ ịzụta ozugbo site na idezi isiokwu.
Ngwa mgbakwunye a na-agbakwunye ngalaba Biography na profaịlụ njirimara. Nnọọ aka maka ịgbakwunye ọdịnaya bara ụba na ịmatakwu gbasara onye ahụ.
Ngwa mgbakwunye a na-enye gị ohere ijikọ faịlụ na akụkọ Joomla ma nye ha maka nbudata ma ọ bụ ụgwọ akwụ ụgwọ site na ngwa mgbakwunye ahụ. Isiokwu - Ndenye aha.
Ngwa mgbakwunye a na-enye gị ohere ijikwa mmekọrịta dị n'etiti akaụntụ onye ọrụ Joomla.
Afọ ojuju ma ọ bụ nkwụghachi
Ọ bụrụ n’ịzụtara otu ngwaahịa anyị ma ya emetaghị gị, anyị na-eweghachi iweghachi gị kpam kpam.
Mgbakwunye ama ama
Mgbakwunye anyị bụ Joomla 3.x dakọtara.
Ihe ndị a ma ama
Jiri isiokwu Joomla dị ka mpempe akwụkwọ ngwaahịa!
Mmepe nke Joomla!
Mpae a wɔbɔe no ma wonyaa nkɔso
Storelọ ahịa Joomla?
Agba agba agbala agba!
Pịa ebe a iji banye saịtị ngosi
Mpempe akwụkwọ: Tinye mpaghara site na ọrụ onContentPrepareForm
Esi agbanwe Joomla ndebiri
Njikọ Ndị Mmepụta
Hazie saịtị gị nke Joomla!
Chọpụta na ibe nke saịtị m, ma ọ bụ site na menus, nhọrọ dịgasị iche nke atụmatụ dị mfe na ọkụ iji gbakwunye na weebụsaịtị Joomla gị. Nwere ike iji ngwa mgbakwunye m, modulu na akụrụngwa iji meziwanye weebụsaịtị gị, blọọgụ ma ọ bụ Ecommerce site na iji Joomla CMS.
M na-enye gị ụfọdụ nkuzi na nkuzi na iji Joomla, dịka otu esi eji ndebiri, otu esi tinye isiokwu ọhụrụ, otu esi emepụta ụlọ ahịa, mepụta modulu, nyocha na ọtụtụ ndị ọzọ. Ga-amatakwu banyere ozi ọma niile na-aga n'ihu wee bịa site na blọgụ m.
N'ime usoro njikwa ọdịnaya ndị ama ama dịka Drupal, WordPress, Joomla, Jimdo, Prestashop ma ọ bụ Shopify, ahọpụtara m Joomla maka ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ m gosipụtara, blọọgụ ma ọ bụ ọbụlagodi ụlọ ahịa n'ịntanetị. Site na ogwe ya nke ihe ndebiri css dakọtara na smartphones na mbadamba, Joomla bu ezigbo ngwa oru maka imeputa websaịtị. You nwere oru ngo ma chọọ ịmalite ọsọsọ? Chọta aha ngalaba gị, nnabata web yana ya ftp na ndị ọbịa ị họọrọ, mgbe ahụ, wụnye Joomla ma hapụ onwe gị ka ị duzie ya na nhazi ya dị mfe. Ọ bụrụ na ị bụ ndị mmepe, dị ka m, ị nwere ike ịga n'ihu ma zụlite ndọtị nke gị: ihe ngosi mmịfe, onyonyo foto, ihe mmịfe onyonyo, wijetị, sistemụ ngosi, inye onyinye, onye na-akwụ ụgwọ ndenye aha, onye njikwa faili, sistemụ ihe ngosi, onye na-enyocha afọ, kalenda na njikwa ihe omume, ndekọ, ntinye vidiyo, njikwa. nkewa mgbasa ozi wdg.
Na Joomla, ihe e kere eke na ebe nrụọrụ weebụ bụ ngwa ngwa. Jiri ohere nchịkwa ya na ndị editọ WYSIWYG were mee ka ọdịnaya gị baa ọgaranya, meziwanye usoro ntụgharị aha gị, pụta na igwe nchọta, nweta clicks ma bulie ahịa gị.
Dị Mfe na kọọdi, Joomla bụụrụ m CMS kacha mma. Creatmepụta saịtị gị adịghị mfe.
Clement, ọkachamara na okike saịtị Joomla
Copyright © 2020 Joomla-Solutions.com - Mgbakwunye, ngwa, modulu na plugins maka Joomla.
Joomla! Mmmmmmmmmm A na-eji aha dị n'okpuru ikike nwere ikike si Mepee Isi Okwu na United States na obodo ndị ọzọ.
Joomla-Solutions.com esoghi na Open Source Matters ma obu Joomla na akwado ya! Ihe oru ngo.
SEO, Ederede weebụ
Plan du saịtị